Onye ọlụlụ gara nke nwere ikike mmezi achọghị ịrụ ọrụ | Law & More
blog » Onye ọlụlụ gara nke ọma nwere mmezi achọghị ịrụ ọrụ
Onye ọlụlụ gara nke ọma nwere mmezi achọghị ịrụ ọrụ
Na Netherlands, mmezi bụ onyinye ego maka mmefu ego nke onye bụbu onye ọlụlụ na ụmụaka ọ bụla mgbe ịgba alụkwaghịm. Ọ bụ ego ị ga-enweta ma ọ bụ nke ị ga-akwụ kwa ọnwa. Ọ bụrụ na inweghị ego ị ga-eji na-akwado onwe gị, inwere ego. Ọ bụrụ na inwere ego ga - enyere gị aka ịkwado onwe gị mana onye ọlụlụ mbụ anaghị enwe, enwere ike ịchọ ịkwụ ụgwọ ego. A na-eburu ọnọdụ ibi ndụ n'oge alụmdi na nwunye n'uche. Onyinye nke nkwado di na nwunye dabere na mkpa nke ndi otu a ruuru ya na ikike ego nke ndi mmadu. Na omume, nke a na-abụkarị mkparịta ụka n'etiti ndị ọzọ. O nwere ike ịbụ na onye gị na ya bi na-ekwukarị na ị ga-enweta ego mgbe ọ ga - arụ ọrụ n'onwe ha. May nwere ike ịchọta nke a ikpe na-ezighi ezi, mana gịnị ka ị ga-eme n'ọnọdụ dị otu a?
Onye ahụ na-azọrọ nkwado di ma ọ bụ nwunye ga-enwerịrị ike igosi na ọ nweghị ma ọ bụ ego na-ezughi oke iji kwado ya ma na ya enweghị ike iwepụta ego ahụ. Ọ bụrụ na inwere ike ịkwado di ma ọ bụ nwunye gị, ebe ị ga-ebido bụ na ị ga-emerịrị ihe niile dị gị mkpa iji nyere onwe gị aka. Ọrụ a sitere na iwu, a na-akpọkwa ya ọrụ nke mgbalị. Ọ pụtara na a na-atụ anya na onye ọlụlụ mbụ nke nwere ikike alimọnụ ga-achọ ọrụ n'oge oge ọ na-enweta alimon.
Ọrụ nke itinye mgbalị bụ isiokwu nke ọtụtụ ịgba akwụkwọ na omume. Ndị a na-akwụ ụgwọ na-ekwukarị na ndị nwere ikike nwere ike ịrụ ọrụ ma mepụta ego n'ụzọ ahụ. N'ime nke a, ndị a na-akwụ ụgwọ na-ewere ọnọdụ ọ bụla na onye nnata kwesịrị ịnwe ego ga-ezuru onwe ya. Iji kwado echiche ya, ndị ọrụ ahụ nwere ikike inyefe ihe akaebe nke, dịka ọmụmaatụ, usoro agụmakwụkwọ (s) nke nnata na ọrụ ndị dịnụ. N'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ ahụ dị ụgwọ na-anwa ime ka o doo anya na a gaghị akwụ ụgwọ mmezi ọ bụla, ma ọ bụ opekata mpe obere ka enwere ike.
Ọ na - esite na iwu ikpe na ọrụ nke onye na - akwụ ụgwọ mmezi iji gbalịsie ike ịchọta ọrụ agaghị adị mfe. Onye na-akwụ ụgwọ mmezi ga-egosiputa ma gosipụta na ya agbaala mbọ zuru oke iji nweta ikike (karịa). Yabụ, onye ga-akwụ ụgwọ mmezi ga-egosi na ọ nọ ná mkpa. A na-enyocha ihe 'igosipụta' na 'ịmeju oke' mgbalị na omume kwa otu ikpe.
N'ọnọdụ ụfọdụ, enweghị ike ijide ụgwọ mgbazinye ọrụ maka mbọ a. Enwere ike kwenye na ọgbụgba ndụ ịgba alụkwaghịm, dịka ọmụmaatụ. I nwekwara ike iche ọnọdụ ndị bilitere na omume: ndị agbamakwụkwọ ahụ gbara alụkwaghịm, di ya ga-akwụkwa onye mmekọ na nkwado nwa. Mgbe afọ 7 gachara, ọ rịọ ụlọ ikpe ahụ ka ha belata alimon, n'ihi na ọ na-eche na nwanyị kwesịrị ịkwado onwe ya ugbu a. Mgbe a nụrụ ya ọ pụtara na di na nwunye ahụ ekwetala n'oge ịgba alụkwaghịm ahụ na nwanyị ahụ ga na-elekọta ụmụaka kwa ụbọchị. Childrenmụaka abụọ a nwere nsogbu dị mgbagwoju anya ma chọọ nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ. Nwanyị ahụ rụrụ ọrụ ihe dị ka awa 13 kwa izu dị ka onye ọrụ nwa oge. Ebe ọ bụ na o nwechaghị ahụmahụ n'ọrụ, n'ụzọ ụfọdụ n'ihi nlekọta nke ụmụaka, ọ dịghịrị ya mfe ịchọta ọrụ na-adịgide adịgide. N'ihi ya, ego ọ na-enweta ugbu a erughị ọkwa enyemaka mmadụ. N'ọnọdụ ndị a, enweghị ike ịchọ nwanyị ahụ ka ọ rụzuo ọrụ ya nke ịgbalịsi ike na ịgbasawanye ọrụ ya ka ọ ghara ịdabere na nkwado di na nwunye.
Ihe atụ a dị n’elu gosiri na ọ dị mkpa ka ndị ọrụ e nyere ọrụ lebanye anya na ndị nnata ha na-arụzu ọrụ dịịrị ha nke gbalịrị ị nweta ego. Ọ bụrụ na ihe akaebe gosipụta nke ahụ ma ọ bụ na enyo ọzọ ọ bụla na ọrụ nke ị nweta ego anaghị emezu, ọ nwere ike ịbụ ihe amamihe dị na ya maka ndị ọrụ iwu ka ịmalite usoro iwu iji mee ka ọrụ nlekọta ahụ nyochaa otu ugboro ọzọ Ndị ọka iwu iwu ezinụlọ anyị nwere ọ willụ ga-enwe obi ụtọ ịgwa gị gbasara ọnọdụ gị ma nyere gị aka n'okwu ahụ.
Have nwere ajụjụ gbasara alimoni ma ọ bụ ịchọrọ itinye maka, ịgbanwe ma ọ bụ kwụsị alimoni? Mgbe ahụ kpọtụrụ ndị ọka iwu iwu ezinụlọ na Law & More. Ndị ọkàiwu anyị bụ ọkachamara na (re) na-agbakọ alimoni. Na mgbakwunye, anyị nwere ike inyere gị aka na usoro mmezi enwere ike. Ndị ọkàiwu na Law & More bụ ndị ọkachamara n'ọhịa nke iwu ezinụlọ na ezinụlọ ga-eji obi ụtọ duzie gị na usoro a, ikekwe gị na onye gị na ya bi.
Previous Post Kedu ihe bụ ikike gị dị ka onye nwe ụlọ?